Kaaliyaha Google wuxuu gaarayaa 500 milyan oo isticmaale bille ah | Androidsis
Kaaliyaha Google wuxuu gaaraa 500 milyan oo isticmaale bishii
Markii sanadihii la soo dhaafay, helitaanka Kaaliyaha Google wuxuu ku fiday luqadaha ugu badan ee adduunka looga hadlo. Sanadkii la soo dhaafay, shirkadda weyn ee raadinta ayaa ku dhawaaqday in kaaliyaha shaqsiyeed uu ahaa waxaa laga heli karaa 1.000 bilyan oo qalab, tiro aad u tiro badan laakiin macnaheedu maahan in la isticmaalay.
Google ayaa kaliya ku dhawaaqday in kaaliyeheeda dalxiis waxaa isticmaala 500 milyan oo qof bil kasta, tirooyin aad u qurux badan haddii aan tixgelinno in ka yar laba sano ka hor, kaaliyaha waxaa lagu heli karaa oo keliya 500 milyan oo qalab, waqti ah kan isku dayay inuu iska dhex muujiyo dadka isticmaala.
Kaaliyaha Google waxaa laga heli karaa inta badan aaladaha casriga ah, laga bilaabo taleefannada casriga ah (iPhone iyo Android) illaa Chromebooks iyada oo loo marayo sameecadaha dhegaha, smartwatches, dadka guriga ku hadla smart ... Intaas waxaa sii dheer, waa sii kordheysaa caadi ahaan in la arko sida Google Kaaliyaha ayaa ku habboon barnaamijyada caanka ah sida Waze ama aalado aysan soo saarin Google lafteeda, sida qeybta saddexaad ee Chromebooks.
Inbadan ayaa ah adeegsadayaasha bilaabay inay adeegsadaan kaaliyaha Google ilaa cku xakameyso otomaatiga guryaha ee guryahooda amarrada codka. Farshaxanka wanaagsan ee dambiga waxaa laga helaa nidaamka deegaanka ee balaaran ee alaabooyinka la jaan qaadi kara ee aan hada ka heli karno suuqa, alaabada ka raqiisan, xaaladaha badankood, marka loo eego kuwa la jaan qaada kaaliyeyaasha kale.
Markaad la qabsato adeegsiga kaaliye macmal ah oo noocan ah, ha noqdo Kaaliyaha Google, Siri, Alexa ama Samsung ee Bixby waa wax aad u adag in la joojiyo isticmaalkeeda. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo kuxiran kaaliyaha aan adeegsano, waxaan helnaa alaabo la jaan qaadi kara, alaabooyin xaalado badan aan la jaan qaadi karin caawiyeyaasha kale, sidaa darteed waxaa nagu qasbay inaan sii wadno kalsoonidooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kaaliyaha Google wuxuu gaaraa 500 milyan oo isticmaale bishii
100-ka maalmood ee SOTKA si aad wax uga bedesho dhaqankaaga cunida oo aad ugujaanto qaab jireed